Abantu babefuna kuba Isitshayina millionaire omnye ladies - Telegraph
Abantu babefuna kuba Isitshayina millionaire omnye ladies – Telegraph
Johnny Du, i-CEO ye-intanethi dating qala-phezulu Tanoan (ndifuna Umntu), ukukhatywa-ngaphandle yakhe quest yokugqibela ngenyanga kwaye ineenjongo fumana ezilungele husbands kuba ezinye ezininzi eligible samakhosikazi bale mihla China. I-abafazi ziquka real estate magnates nemizi-mveliso tycoons ukusuka Sichuan kwiphondo ababekho akukwazeki ukufumana Umnu nangona Kunjalo, okanye mhlawumbi ngenxa yabo ballooning bank-esingangezelelwanga. Ndiyakholwa lixesha lokuqala kukho wenziwe enjalo scheme kuphela tailored kuba wealthy abafazi, Umnu Du wamxelela yonke imihla Telegraph kule veki ngexesha utyelelo i-shanghai, omnye izixeko nguye tapping kuba enokwenzeka husbands. Dating ngu big ishishini kwi-China, ilizwe ukuba ufumana reputedly ekhaya ezinye ezingama-omnye abantu. Ekuqaleni lo nyaka umseki we omnye wemiceli-China-intanethi dating zephondo x Baize x waxelela wobulali lwethelevijini yakhe inkampani waba ukwenza yonyaka profits ka-jikelele £ yezigidi ukusuka yayo yezigidi ebhalisiweyo abasebenzisi. Kodwa kwilizwe notorious kuba dramatic ngokwesini-imbalance ukuba wenze ityala izigidi abantu ukuba omnye-ubomi, uninzi matchmaking nee-arhente kugxila fixing uthando ubomi Isitshayina abantu. Nkqu urhulumente ubona ekuncedeni abantu bafumane uthando njengomba ophambili. Wokugqibela kwinyanga Abantu yonke imihla newspaper walumkisa ukuba loluntu kweharmony kwaye uzinzo basenokuba threatened ukuba izigidi lwasemaphandleni abantu baba akukwazeki ukufumana partners. Kodwa China super-otyebileyo abafazi ingaba iyonela kububanzi bephepha iingxaki zabo obubobakhe, wathi Umnu Du, hayi noko ukufumana ixesha thambileyo kuba ingaba-kuba husbands. Maninzi kakhulu uxakekile, kunjalo, ngoko ke baya akunayo kakhulu ixesha ukuhlangabezana namanani umhla. Baya asoloko surrounded yi-lwamashishini abantu okanye abathengi, ngoko ke baya akunayo kangako nethuba ukuhlangabezana okulungileyo guys ngaphandle zabo ngqo izangqa. Wealthy abantu musa necessarily ufuna umfazi njengoko ngempumelelo njengoko nabo. Abazithandayo elungileyo umfazi kwaye elungileyo umama, kodwa ke, musa necessarily ufuna a ngempumelelo umfazi ngenxa yokuba ukuba yena uza ukuchitha ilanlekile ixesha kwi ishishini kodwa hayi kwi-usapho. Ngexesha elinye wealthy abafazi kuba high-standard kwi-ngokukhetha abayeni babo. Ngenxa yokuba ingaba kakhulu ngempumelelo, baye kanjalo silindele zabo umyeni kufuneka, ubuncinane, njengoko ngempumelelo njengoko zinjalo. Rebecca Chen, abo e-sesinye youngest Chengdu esekelwe millionaires ukuba ujoyinela le projekthi, wathi loluntu norms kanjalo hampered a otyebileyo umfazi ukukhangela olugqibeleleyo umntu. Abantu kuba uphezulwana kakhulu kwimpumelelo umyinge kwi-ingxowa-uthando kwaye kakhulu ngokubanzi ukhetho, ukususela banako khetha umntu othile thoba loluntu iqela, wathi Chen, egama usapho ulawulo a Chengdu ipropati kwaye hotel empire. Kuba abafazi, kubalulekile phantse ukwenzeka ukukhetha ngokuluthoba x zabo usapho nabahlobo avume approve, baza banqwenela ubuso iingxaki ezininzi. Umnu Du hunt kuba eligible bachelors, ngentsebenziswano ne-Hong Kong esekelwe dating-arhente Feng Qi Huang, waqalisa kwi-juni xa waqalisa ethabatha-intanethi izicelo ezivela kuwo China kwaye ihlabathi. Ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku jikelele, abantu oyisayinileyo phezulu, kuquka omnye Australian nabalandeli-zicelo ukusuka KWETHU nasekhanada. UK esekelwe graduates ka-famous British iyunivesithi kokuba kanjalo isetyenziswe, wathi. Isigaba ababini: uya begin ngojulayi xa organizers qala sifting nge-CVs kwaye yohlolo – ingaba-kuba husbands kwi-uthotho ubuso ubuso iintlanganiso kunye kubudlelwane specialists kwaye fortune-tellers kwi-hotels jikelele-China. A shortlist babantu baya umenywe kwi-i-zonke-inkcitho-ihlawulwe uhambo ukuba Chengdu kwi-agasti, China Valentines x Mhla, kuba sangokuhlwa imihla kunye abafazi, zonke iphelelwe phakathi kunye. Ukhuphiswano kuba indawo kwi-ithebhule iya kuba fierce. Abafaki-zicelo kufuneka ube ubuncinane umgangatho wemfundo kwaye ifane ubudala okanye nangaphezulu kwe-uthando-starved millionaires. Abakho ikhangela tomboys, wathi Umnu Du, ngubani kwaye iphethe mfundisi ke iqondo kwi-engineering ukususela Ngezifundo ka-Minnesota kodwa wathi waba happily watshata nababini abantwana. Ngabo ikhangela guys abakhoyo kakhulu mature, ukuqonda kwaye kakhulu supportive, kunye uluvo humor kwaye okulungileyo incasa kwaye abo sazi njani ukuba bonwabele ubomi kwaye ingaba honest. A incasa kuba Mahjong x a esiqhelekileyo Isitshayina gambling umdlalo x waye kanjalo enqwenelekayo, uqokele. Mahjong kakhulu ethandwa kakhulu ifomu entertainment kwi-Sichuan kwaye Chengdu.
UNKSZ Chen, othe wazalwa ngowe-i-urumqi, ukuza kuthi ga ngoku-western China, wathi kuye namanani umntu kufuneka abe sociable, generous, vigorous, kwaye conversational.
Kanjalo kufuneka imali
Umele kuba abanye kwezoqoqosho ukomelela, ubuncinane izigidi ezingama-yuan kwi-yexabiso, ukususela zonke bahlobo bam kuba ukuba kakhulu imali okanye ngaphezulu kwaye personal ubutyebi yi kubonisa esihlangeneyo capability. Lowo kufuneka kuba okulungileyo morals kwaye isempilweni ukuzonwabisa. Abafaki-zicelo kufuneka kanjalo kulungiselelwa ukuba relocate ukuba Chengdu, rapidly lokukhula isixeko jikelele, iimayile west ka-i-shanghai, famed kuba yayo pandas, fiery cuisine kwaye aviation kwaye car nemizi-mveliso imizi-mveliso. Kuba abantu ezama a millionaire ukubiza kwezabo, Chengdu, ekhaya phantse million yabantu, akungombono indawo qala. Ingingqi sele experienced breakneck kuhlumo loqoqosho ukusukela Beirut waqalisa yayo Yiya West drive ukuphuhlisa China sangaphakathi.
Kulo nyaka uphelileyo Chengdu uqoqosho lukhule
pesenti ngexesha isixeko Esitsha Century Yehlabathi Centre, abarhwebayo kwaye leisure complex ukuba uza reputedly kuba ihlabathi likhulu kuma-yedwa building, imiselwe ukuvula kamva kulo nyaka. I-Mediterranean-_umxholo complex uza reportedly kuzigwagwisa ezimbini luxury, -igumbi hotels, zinokuphathwa springs, marine park kwaye eyakhe artificial beach. Ngokunxulumene a otyebileyo-uluhlu compiled by i-i-shanghai esekelwe luxury nompapashi umoya omdakacomment, China richest, abantu ebolekiweyo ngokubhekiselele kwi-Sichuan phondo xa ukuphila ngendlela yayo eyinkunzi Chengdu. Sichuan kwiphondo sele liphezulu inani phakathi kwabantu China richest. Emva kwezoqoqosho komhlaba kwi-China abantu abaninzi kwi-Sichuan waba kakhulu otyebileyo, kunye amadoda nabafazi, Umnu Du pointed ngaphandle. Kananjalo, Sichuan girls ingaba famous kuba ekubeni pretty kananjalo ebukekayo, hardworking kwaye intelligent
← Indlela Kuhlangana kwaye Umhla Isitshayina Girls - e-Asia Dating Ingcaphephe
Isitshayina Abafazi Icacile-Intanethi Ngokwenene Isitshayina →